Ngabe ukuhlala ubuso nobuso kuyindlela enamandla kakhulu yokuzama ucansi lomlomo? - Ucansi-Uthando-Impilo
Ingabe Le Yindlela Enika Amandla Ngokuzama Yokuzama Ucansi Lomlomo?
Kwabesifazane abathile, kumayelana nokuhlala ubuso nobuso.
Izithombe zeCaiaimage / Trevor Adeline / Getty
Uma kukhulunywa ngokuthola ucansi lomlomo, isikhundla sabesifazane abaningi sokuzenzakalelayo ukubuyela emuva. Futhi kuningi okungashiwo ngalokho: Ungakhululeka futhi uvumele umlingani wakho akhathazeke ngokuthi uzokwenzenjani. Kepha futhi kuningi okungashiwo ngokwamukela umlomo phezulu, ukuhlala ebusweni.
Phakathi kokunye, kukubeka ekulawuleni okuphelele, futhi abanye besifazane bathola ukuthi nakho kunikeza indawo engcono. 'Inikeza umlingani wakho ukufinyelela okugcwele kulokho okuyi-erogenous zone kanye nendawo ebaluleke kakhulu okufanele ivuselelwe ukuze kwenzeke i-orgasm: isitho sakho sangasese sangaphandle, kufaka ne-clitoris yakho,' kuchaza uLaurie Mintz, owelapha ngezocansi nombhali we Ukuba Isimo sezulu . 'Abaningi bakuthola kuyisikhundla esinika amandla ngokuphelele lokhu, njengoba kugxilwe kukho konke, amaphesenti ayi-100 entokozweni yakho.'
Uma ukuzungeza ubuso bomlingani wakho kuzwakala kusabisa, siyakuthola. Uma ungakaze uzame ukuhlala ubuso nobuso, kungazizwa kusengozini emangalisayo. Nakhu ukuthi ungazama kanjani ngaphandle kokuzizwa ungekho ngokuphelele endaweni yakho yokududuza.
Buza umlingani wakho
Uma umbono wokuthola ucansi lomlomo phezulu ukuhlaba umxhwele, uMintz uncoma ukutshela umlingani wakho okuthile okuqondile okufana nalokho, ngiyathanda uma wehlela kimi futhi ngingathanda ukukuzama lokhu kusikhundla esisha-nami ngihleli ebusweni bakho. Ingabe umdlalo ngokuzama? Uma umlingani wakho engazange akwehlele phambilini, ungabatshela ukuthi ungathanda ukuzama zombili lezi zikhundla, kusho uMintz.
Beka isisindo sakho emadolweni
Manje njengoba nobabili ningene, isikhathi sezinto zokusebenza. Isithiyo sokuqala ukuthola ukuthi ungangena kanjani esikhundleni. UMintz uncoma le nqubo elandelayo: Okokuqala, bamba isifuba sikamlingani wakho ngamadolo akho embhedeni, ugoqe ubheke phambili kuze kube yilapho ikhanda labo liphakathi kwamathanga akho, bese ulenabisa kuze kufike umlomo womlingani wakho.
'Kubizwa ukuhlala' ebusweni, 'kodwa uguqile impela,' kusho uchwepheshe wezocansi uVanessa Marin, umsunguli wesifundo se-online orgasm Ukuqeda Isikole . Empeleni kuhle impela uma usuthole ukulengiswa kwayo. 'Ufuna ukubamba isisindo sakho emadolweni kunokuba ubeke isisindo sakho ebusweni bomlingani wakho,' kusho uMarin.
Ukwenza ukulinganisa kube lula, uMarin uncoma ukuthi umlingani wakho alale phansi eduze kwekhanda lombhede futhi abeke izandla zakho ebhodini eliphezulu noma odongeni ukuze uthole ukusekelwa okwengeziwe. Ngaleyo ndlela, uzobe ungakhathazeki ngokugcina ibhalansi yakho futhi esikhundleni salokho ungagxila kukho konke ukunaka kwakho.
Into enhle ngokuthola ucansi lomlomo ngaphezulu ukuthi, njenganoma isiphi isikhundla esikubeka phezulu, ungalawula ingcindezi ngokusondela eduze noma kude kakhulu nomlingani wakho, kusho uMarin. Yehlisa noma uphakamise umzimba wakho lapho ufuna ukuzwa ukuzwa okungaphezulu noma okuncane.
Zama ukuthi umlingani wakho azibambe
Uma ufuna ukulawula okuphelele, ungacela umlingani wakho ukuthi ahlale ethule nolimi ngaphandle ngenkathi uzama iminyakazo ehlukile. UMarin uncoma ukugaya izinkalo zakho kancane kancane emuva naphambili noma nxazonke kumbuthano ebusweni babo.
Ngenye indlela, uma ufuna umuzwa wokulawula ngenkathi umlingani wakho enza wonke umsebenzi, ungahlala phansi uphumule, uthi UJess O'Reilly , Isazi sezocansi sika-Astroglide. 'Umlingani ohlezi angahlala athule futhi avumele ophathina ophethe ukuthi asebenzise izindebe zabo, ulimi, ubuso, izingalo zeminwe, nezandla ukuqabula, ukukhothana, ukukhotha, ukushelela nokuhlikihla,' usho kanje.
Cabanga ngokuhlala kancane
Uma ukuhlala ubuso nobuso kukukhulula, ungazama esinye salezi zindawo eziphakathi, kusho u-O'Reilly: Cela umlingani wakho alale phansi onqenqemeni lombhede abeke unyawo olulodwa embhedeni nolunye phansi, noma ngena kuzo zozine ikhosombe lakho liseduze komlomo wabo futhi ubhekane nalo. 'Ungazithoba kancane ebusweni babo futhi ujabulele ukuzwa ngaphandle kokuhlala ngokugcwele,' usho kanje.
Okukhathazayo abanye abantu abanakho ngokuhlala ubuso ubuso ukuthi bangacunula ubuso bomlingani wabo, kusho uMintz. Lokhu cishe akunakwenzeka, ngoba ungazibamba ngamathanga akho. Kepha uma ukhathazekile ngakho, ungakha isignali yokuthi umlingani wakho akhulume lapho bedinga ukuphumula, njengokuthinta ithanga lakho noma isinqe sakho. Isiginali enjengale ingaba wusizo ukuxhumana ngokujwayelekile ngoba umlomo womlingani wakho kungenzeka ukuthi u-er, umatasa.
Linga ngezikhundla ezahlukahlukene
Njengoba kunezindlela ezingaphezu kweyodwa zokwamukela ucansi lomlomo, kunezindlela ezingaphezu kweyodwa zokubhekana ubuso nobuso. UMintz uncoma ukuzama ukubheka kude nomlingani wakho futhi ubheke kubo futhi ubone ukuthi yikuphi okuthandayo kakhulu.
Yazi umlingani wakho naye uyayithanda
Umqondo wokukhonjiswa ngale ndlela ungenza abanye abantu bangakhululeki, kepha amathuba okuthi umlingani wakho ukujabulele. 'Yazi ukuthi lesi yisimo esimnandi ngokweqile umlingani wakho nakanjani azosithanda,' kusho uMarin. 'Kepha ungangena kalula kuyo ngokufiphaza amalambu noma ukukhanyisa amakhandlela. Noma zama ukuvala amehlo kophathina wakho bese uhambisa umzimba wakho eduze noma kude nomlomo wabo. ' Kepha njenganoma ikuphi ukuzibandakanya ocansini, ungacabangi — xhumana nomlingani wakho njalo nangokuvulelekile ukuqinisekisa ukuthi nobabili niyazijabulisa.
Konke okushiwo, uma ukwenza ucansi lomlomo phezulu kungakuthandi — noma uzama futhi ungeyena umlandeli — asikho isidingo sokwenza. 'Abelaphi abaningi bezocansi batusa ukuthi umuntu azame izinto ezintsha futhi welule imingcele yakhe yezocansi-kodwa angalokothi enze noma yini ephikisayo,' kusho uMintz. 'Uma umbono uzwakala ungathandeki ngokuphelele, ungakwenzi. Uma kuzwakala kuthusa kepha kuyenzeka, kuzame. Ungase uyithande. '
ama-braids anobuhlalu ekugcineni
paris hilton no kim kardashian
Izikibha eziyi-100 zikakotini abesifazane
ucansi nentombazane esikhathini